Simon Mulongo oo fajac ay ku noqotay tallaabadii dalka looga eryay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Simon Mulongo oo fajac ay ku noqotay tallaabadii dalka looga eryay
Simon Mulongo oo fajac ay ku noqotay tallaabadii dalka looga eryay
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay sababihii ay dalka uga ceyrisay Kuxigeenka Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa sheegay in aysan ku degdegin in ay dalka ka ceiriyaan Mr Malungo islamarkana ay arrintan muddo dheer soo socotay.
Waxaa uu intaa kudaray in ay adagtahay in la qaato go’aanka ah in qof dublamaasi ah dal laga ceyriyo, balse go’aankan uu ahaa mid laga fursan waayay.
“Waxa la yiraahdo persona non grata waa arrin aad u adag oo aanan lagu degdegin oo aanan la sameynin oo dowladaha inta badan ay aad uga gaabsadaan, indhaha ka qabsadaan ay maraan jidad kale oo qof sidaas oo kale ah dalka looga badalo ama looga kaxeeyo marka arrintaas anaga waan ka fajigneyn waana ognahay in halkaas wax la gaarsiiyo ma ahayn laakiin haddii laga fursan waayo waxaa muqadas ah ilaalinta qarannimada Soomaaliya,” ayuu yiri Mr Cabdi Risaaq oo hadal ka jeedinayay Facebook-ga.
Simon oo wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ee Uganda ayaa fajac ku tilmaamay go’aanka dowladda. Wuxuu sheegay inuusan garanaynin sababta looga ceyriyay dalka, wuxuuna sheegay in warqadda ka soo baxday dowladda aysan ku jirin faahfaahin ku saabsan sababta loo ceyriyay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa intaa ku daray in Simon Malungo uu ku tuntay shuruucda dalka u taalla taasina ay sababatay in ay dalka ka ceyriyaan.
“Ninkaan isaga ah aniga oo aanan rabin inaan hoos u galo, si guud waxaan kuugu sheegayaa in raad badan oo uu leeyahay lagu arkay waxyaabo dambiyo ah, wadanka la joogo sharcigiisa waa in la dhowraa, sharafkiisa waa in la dhowraa,” ayuu intaa ku daray wasiirka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa dhanka kale ku eedeeyay Simon Malungo in uu isku dayay in uu hor-istaago baaritaankii dadkii ay ciidamada Amisom ku dileen deegaanka Golweyn ee gobololka Shabeelada hoose.
“Dad Soomaaliyeed ayaa meesha la yiraahdo shabeelada Hoose Golweyn si ka baxsan bina’aadanimada loogu dilay, si kas ah ayaa loo dilay, dadkaasi dilitaankoodii waxaa la sameeyay baaris, baaritaankii inuu wax badan hor-istaago ama marin habaabiyo ayuu isku dayay,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda.
Mr Cabdi Risaaq ayaa carabka ku adkeyay in mar hore ay ahayd in Simon Malungo dalka laga ceyriyo marka la eego falalka uu ku kacay.
“Waxay ahayd in ninkan mar hore dalka ka tago runta haddii la isu sheego in maanta la isla soo gaaro Meesha aan joogno maba ahayn-ba sanado ka hora yay ahayd in ninkan uu Meesha ka tago ,” ayuu intaa ku daray.
Maxuu yahay micnaha persona non grata?
Waa ereyo asal ahaan ka yimid Laatiinka kaasi oo ka dhigan”qof aan la soo dhaweyn.” Erayga waa mid xambaarsan macne dublamaasiyadeed waxaana loola jeedaa qof ajnabi ah oo dal gaar ah ka mamnuuc ah in uu soo gelo ama laga mamnuuco in uu sii joogo dalkaas.
Waxaa jimladan persona non grata markii ugu horeysay ay heshay micnha dublamaasiyadeed ka dib heshiiskii Vienna ee lagu qeexay xiriirka dhanka diblomaasiyada sanaddii 1961.
Sida ku cad qodobka 9-aad ee heshiiska, waddanku wuxuu ku dhawaaqi karaa in xubin kasta oo ka tirsan shaqaalaha dublamaasiyada in dalka looga baahnayn iyada oo aan loo baahnayn in dalkaasi uu sharaxo go’aankiisa.”
Ku dhawaaqida persona non grata waa qaabka ugu adag ee uu dal ku ciqaabi karo diblumaasiyiinta ajnabiga ah iyada oo eegayo in laga ilaaliyo xarig iyo noocyada kale ee dacwooyinka iyada oo la raacayo xasaanadda diblomaasiyadeed.
Qofka marka lagu dhawaaqo in aan dalka looga baahnayn waxaa sidoo kale la joojin karaa shaqdii uu hayay.
Go’aanka Persona non grata waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa dadka ama diblamaasiyiinta aan weli dalka soo gelin.
Inta badan waxaa loo adeegsaday tilmaamo astaan ah si uu waddanku u muujiyo in aanu raalli ka ahayn ficillada waddan kale ama cid kale.
Goormaa ayaa la adeegsadaa Persona non grata
Wadamada ku dhawaaqa in qof aan looga baahnayn dal , qasab ma aha in ay sharaxaad ka bixiyaan go’aankooda, waxayna u cuskan karaan sababo badan oo kala duwan.
Inta badan waxaa loo adeegsadaa in lagu cadeeyo ama lagu tilmaamo in waddanku uusan raalli ka ahayn ficillada waddan kale ama hay’ad.
Waxa kale oo loo adeegsaday in dalka laga saaro dublamaasiyiin lagu eedeeyay basaasnimo, sidii dhacday sannadkii 2016-kii markii Hindiya ay dalkeeda ka cayrisay dublamaasi Pakistani ah oo lagu magacaabo Mehmood Akhtar ka dib markii la xiray oo lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay shabakad basaasnimo.
Waxa shaacinta arrintan sidoo kale loo adeegsadaa waxa ay Soomaalida ugu yeeraan( Qaniiyo ayaa qaniijo kaa fujisa) oo ah in dal tallaabo uu qaaday loogu jawaabo tallaabadii mid la mid ah.
Imisa jeer ayay dolwadda Soomaaliya adeegsatay
Dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa waxaa ay labo mar adeegsatay Persona non grata intii ay xilka joogtay.
Bishii jaano ee sanadii 2019 ayay ahayd markii wasaaradda arimaha dibedda ee Soomaaliya ay ku amartay wakiilka gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya inuu si degdeg ah waddanka uga baxo, ka dib markii uu warqad ku aaddan rabshadihii ka dhacay Baydhabo u diray wasiirka amniga gudaha.
Wasaaradda arimaha dibedda ayaa xilligaasi ku wargelisay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres, in Nicholas Haysom aan laga rabin isla markaana aanu ka shaqeyn karin Soomaaliya, sidaa awgeedna loo baahan yahay inuu dalka uga baxo sida ugu dhaqsaha badan.
Ceyrinta Kuxigeenka Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa noqonaysa markii labaad oo ay dowladda Soomaaliya adeegsatay Persona non grata.
Previous articleAhlu Sunnada Gobolada Dhexe oo diiday in lala barbardhigo Shabaab
Next articleRooble oo qaabilay Kaaliyaha Xoghayaha Guud QM ee Afrika